နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဂိုရှယ်​​လေးဆိုတဲ့​ကောင်​ ဘာ​ကောင်လဲ လို့ မေးနေပြီ News - MyanmarMagazine
နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဂိုရှယ်​​လေးဆိုတဲ့​ကောင်​ ဘာ​ကောင်လဲ လို့ မေးနေပြီ News
ဂိုရှယ်​​လေးဆိုတဲ့​ကောင်​ ဘာ​ကောင်​လည်း လိုက်​ရတာ အ​တော်​ခတ်​ခဲတာပဲ ၃၀မိနစ်​ ​တောင်​မကြာပါလား ကွ:?
ယ​နေ့ ဦကိုနီ ​သေဆုံးမှုကို ပြည်​ထဲ​ရေးဝန်​ကြီးပါ သမ္မတရုံး က ဦး​ဇော်​​ဌေး ပါတယ်​
လိုက်​ဖွ ​နေတဲ့ ​ဂိုရှယ်​​လေး (ခ)​အောင်​နိုင်​​ထွေး က​လောင်​နံမည်​ ဂျွန်​က​နေဒီဘု ဆိုတာ ဗမာပြည်​ကွန်​မြူ နစ်​ပါတီက ဗကပ ရဲ​ဘော်​ ဘတင်​ ကွန်​မြူနစ်​ ရဲ့ သား ဂိုရှယ်​​လေးဆိုတဲ့​ကောင်​ ပါပဲ
*** အ​မေရိကန်​နိုင်​ငံသားခံယူထား ပြီး လာအိုက​နေတဆင့်​ မြန်​မာပြည်​ ကို ခိုးဝင်​ဖို့ကြိုးစား​ပေမဲ့ ​သောက်​သုံး မကျလို့ မ​အောင်​မြင်​ခဲ့ဘူး****
သူ့မိန်းမက သ​င်္ဘောသားနဲ့ ​ဖောက်​ ပြန်​ပြီးခိုးရာလိုက်​သွားရာက သားတစ်​​ယောက်​ ကျန်​​နေခဲ့တယ်​ သူက TIMEသတင်း စာမှာ အလုပ်​လုပ်​တယ်​***
မြန်​မာပြည်​ က အဓိက အဆက်​အသွယ်​ က​တော့ MOI က တနင်္လာသား နဲ့ အဆက်​အသွယ်​ ရှိတယ်​*** ဦးကိုနီခရီးစဉ်​သတင်း​တွေ ပုံ​တွေဟာ MOIက​နေ ကျိုး​ပေါက်​ပြီး ဂိုရှယ်​​လေးစီ ကို​ရောက်​​နေတယ်​**ဂိုရှယ်​​လေး (ခ)​အောင်​နိုင်​​ထွေးက ​ငွေရရင်​ ဘာမဆို လုပ်​တယ်​
*** MOIက ကျိုး​ပေါက်​သတင်း​တွေက​နေ ဦး​ဇော်​​ဌေး သမ္မတရုံးတို့ ပြည်​ထဲ​ရေးဝန်​ကြီး တို့ကို စွပ်​ဆွဲ ​ရေးသားခဲ့တယ်​&****&& ကွန်​မြူနစ်​ ဝါဒီတစ်​ဦးဖြစ်​ပြီး မြန်​မာပြည်​ ကို သူ့အ​ဖေ လက်​ထက်​ကတည်းက ပျက်​စီးရာ ပျက်​စီး​ကြောင်း​တွေ လုပ်​​ဆောင်​ ခဲ့တယ်​
*** ယ​နေ့ ဒီမိုက​ရေစီပါ အမည်​ခံလူတချို့ဟာ တချိန်​က ဗမာပြည်​ကွန်​မြူနစ်​ပါတီ ကဆင်း သက်​လာသူ အများစု ဖြစ်​​နေတာကုိလည်း ​ဖော်​ထုတ်​ သိရှိလိုက်​ရပြန်​တယ်​** မင်းနှဲ့ကွာ ​မြွေး​ပွေးကိုမှ လာစရတယ်​လို့ မင်း​တော့ ​သေပြီ ​အောင်​နို​င်​​ထွေး​ရေ
** မင်းစီကို သတင်းပို့​နေတဲ့ အစိုးရဝန်​ထမ်း ထဲက လူ​တွေလည်း ထမင်းအိုးကွဲပြီလို့ မှတ်​လိုက်​​တော့*** မင်းက ငါ့ကိုမှ လာထိမိတာကိုကွ
*** ​သေဖို့သာပြင်​ထား မင်းတို့အရှုတ်​ထုတ်​ တာဝန်​ရှိသူ​တွေ အကုန်​သိ​အောင်​ ငါဆက်​ လိုက်​ပြီး တင်​​ပေးမယ်​*** . Kyaw Swar